Noocyada foolkaanaha: sifooyinka iyo noocyada qarxinta | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 24/11/2021 16:42 | Geology
Waxaan ognahay in foolkaanooyinku ay yihiin dhismayaal juquraafi ah oo erya magma ka timaadda gudaha dhulka. Magma ma aha wax ka badan cuf weyn oo dhagax dhalaal ah oo ka yimi marada dhulka. Marka magma gaadho oogada sare waxa loo yaqaan lava. Way badan yihiin noocyada foolkaanaha marka loo eego qaabkooda iyo nooca finan ay qabaan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa noocyada kala duwan ee foolkaanooyinka jira iyo waxa ay yihiin qaraxyadooda.
1 Noocyada volcano-yada marka loo eego dhaqdhaqaaqooda
2 Noocyada foolkaanaha sida ay u kala dillaacaan
3 Noocyada qaraxyada
Noocyada volcano-yada marka loo eego dhaqdhaqaaqooda
Kuwani waa noocyada ugu waaweyn ee foolkaanaha iyadoo loo eegayo nooca waxqabadkooda:
Volcano firfircoon. Waa folkaanaha aan firfircoonayn oo qarxi kara wakhti kasta. Tani waxay ku dhacdaa inta badan volcano, laakiin tusaale ahaan, waxaan soo qaadan karnaa Volcano Cumbre Vieja ee La Palma, Spain (hadda qarxay), Volcano Etna ee Sicily, Talyaaniga (oo hadda qarxay) iyo Volcano Fuego ee Guatemala ( hadda qarxay) iyo Volcano Irazú ee Costa Rica.
Folkaanaha aan shaqayn Waxa kale oo loo yaqaan kuwa hurda, waana foolkaanooyin ilaaliya dhaqdhaqaaqa ugu yar. In kasta oo dhaqdhaqaaqiisu yar yahay, haddana marmar wuu dilaacaa. Marka aysan jirin qarxin foolkaanooyin ah qarniyo badan, foolkaanada waxaa loo arkaa mid hurday. Volcano Teide ee jasiiradaha Canary ee Spain iyo Volcano super Yellowstone ee Maraykanka ayaa ah tusaaleyaal foolkaanooyin hurday. Si kastaba ha ahaatee, labada tusaaleba waxay muujiyeen dhaqdhaqaaq sannadihii u dambeeyay, dhulgariir fudud ayaa ka dhacay deegaankooda, taas oo muujinaysa in ay weli "nool yihiin" oo laga yaabo inay noqdaan kuwo firfircoon mar uun, ma dabar go'aan ama barakicin.
Volcano dabar go'ay. Waa foolkaanadii ugu dambeysay ee qaraxda, oo soo jirtay in ka badan 25.000 oo sano. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaashu ma saarayaan in ay mar kale soo muuqan karaan. Habkan waxa kale oo loo yaqaan volcano kaas oo dhaqdhaqaaqiisa tectonic uu ka barokacay isha magma. Volcano Head Diamond ee Hawaii waa tusaale foolkaano dabar go'ay.
Noocyada foolkaanaha sida ay u kala dillaacaan
Waa kuwan noocyada kala duwan ee foolkaanaha ee u jira sida ay u kala dillaacaan:
Folkaanaha Hawaiian. Lavaga ka soo baxa foolkaanahani waa dareere oo ma sii daayo gaas mana keeno qarax inta uu qaraxu socdo. Sidaa darteed, qarxinta foolkaanadu waa aamusan tahay. Inta badan folkaanaha Hawaii waxay leeyihiin noocyadan qarax, sidaas awgeed magaca. Gaar ahaan, waxaan ka xusi karnaa Volcano Hawaiian oo loo yaqaan Mauna Loa.
Volcano Strombolian. Si ka duwan foolkaanaha hadda la sharraxay, Volcano-ka Strombolia waxa uu soo bandhigaa qaddar yar oo lafaha viscous ah oo qulqulaya, oo leh qaraxyo ay ku jiraan qaraxyo joogto ah. Dhab ahaantii, lafadu way kiraystaa marka ay kor u kacdo tuubada, ka dibna dhaqdhaqaaqa folkaanaha ayaa hoos u dhigaya inuu bilaabo kubbadaha lafaha ee isku dhafan ee loo yaqaan 'volcanic projectiles'. Magaca Volcano-kan waxa loola jeedaa Volcano-ka Strombolia ee dalka Talyaaniga, kaas oo si qaafiyad ah u qarxa 10kii daqiiqoba.
Volcanooyada Vulcan. Xaaladdan oo kale, waa qarax aad u daran oo burburin kara volcano ay ku yaalaan. Lava waxaa lagu gartaa inuu yahay mid aad u muuqda oo ka kooban gaas badan. Tusaale ahaan, waxaan ka xusi karnaa Volcano Vulcan ee Talyaaniga, kaas oo waxqabadkiisa volcano uu dhaliyay foolkaanahan.
Volcano Plilian. Volcanoes-yadani waxay leeyihiin lavavious aad u muuqda, kaas oo si dhakhso ah u adkeeya oo ka dhigaya furka godka. Cadaadiska aadka u weyn ee ka dhasha gaaska guduhu wuxuu keenaa dildilaaca transverse si ay u furmaan, mararka qaarkoodna si xoog leh u erya furka. Tusaale ahaan, waxaan ka xusi karnaa Volcano Bailey Mountain ee Martinique, kaas oo magaca volcano laga soo qaatay.
Volcano Hydromagmatic. Qaraxyada foolkaanaha waxaa sababa isdhexgalka magma iyo biyaha dhulka ama dhulka. Iyada oo ku xidhan saamiga magma / biyaha, uumi badan ayaa la sii deyn karaa. Dhaqdhaqaaqa foolkaanada noocaan ah waxa ay ku badan yihiin foolkaanooyinka deegaanka Campo de Calatrava ee dalka Spain.
Folkaanaha Iceland. Volcano noocaan ah, lafaha ayaa qulqulaya oo dillaaca waxaa soo saara dildilaac dhulka ah, ma aha godka. Sidaas ayaa ku dhalatay dhulkii ballaadhnaa ee lafaha. Volcano-yadan intooda badan waxay ku yaalaan Iceland, waana sababta ay magacooda u heleen. Tusaale gaar ah waa Volcano Krafla ee Iceland.
Dhul-hoosaadka Volcano. Inkasta oo la yaab leh, waxaa sidoo kale jira volcano firfircoon oo ku yaal gunta hoose ee badda. Dabcan, qarxinta baddu inta badan waa muddo gaaban. Xaaladaha qaarkood, lafaha la soo daayay waxay gaari karaan oogada oo sameeyaan jasiirado foolkaanooyin ah marka ay qaboojiso.
Aan in yar diiradda saarno nooca qarax ee uu foolkaano kasta leeyahay. Waxay kuxirantahay xaalada tababarka iyo horumarka. Aynu aragno noocyada dillaaca ee jira:
Hawaiian: Volcano-gu waxa uu sii daayaa lava yar oo viscous ah, kaas oo ah dareere aad u badan, sababtoo ah ma haysto wax badan oo pyroclastic ah (isku-dar kulul oo gaas, dambas iyo jajabyo dhagax ah. Gaaska si tartiib tartiib ah ayaa loo sii daayaa, markaa qaraxu waa yar yahay.
Strombolian: foolkaanooyinku waxay sii daayaan walxaha pyroclastic. Qaraxyada ayaa ah kuwo teel teel ah oo foolkaanadu aysan sii dayn lafaha.
VulcanianVolcano-gu waxa uu soo daayaa lavavious viscous oo leh dareere aad u yar si degdeg ahna wuu u adkeeyaa. Daruur weyn oo ah walxo pyroclastic ah ayaa sameysma iyo xaddi badan oo dambas ah ayaa soo baxaya. Waxaa lagu gartaa dillaacyo qaab daruuro la mid ah boqoshaada ama fangaska. Dhaqdhaqaaqyadu guud ahaan waxay ku bilowdaan qarax quusin oo sii daaya qashinka. Muuqaalka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qarxinta magma viscous, kaas oo qani ku ah gaaska foolkaanaha oo sameeya daruuro madow.
Pliniana ama VesuvianaVolcano-gu wuxuu qarxiyaa lafaha aad u muuqda oo xoog leh. Waxaa lagu gartaa xoojinta aan caadiga ahayn, dillaaca gaaska joogtada ah iyo dheecaanka dambaska weyn. Mararka qaarkood qarxinta magma waxay keentaa in korka foolkaanada ay dunto oo ay abuurto bohol. Inta lagu jiro qarxinta volcano Prinia, dambas fiican ayaa ku fidi kara meelo waaweyn. Qarxitaanka Volcano Pliny waxa loogu magac daray dabiicaddahii caanka ahaa ee Roomaanka Pliny the Elder, kaas oo ku dhintay qarxintii Vesuvius sanadkii 79 AD.
Brawler: Volcano-gan waxa loogu magacdaray ka dib markii foolkaanada Pelee ee Martinique ay ka qaraxday 1902-dii, kaas oo ay ku dhinteen kumannaan qof. Lavadu si dhakhso ah ayey u xoojisay oo waxay abuurtay fur godka. Maadaama aysan jirin meel gaaska laga saaro, cadaadis badan ayaa ka dhalan doona gudaha Volcano, sidaas darteed darbiga volcano wuxuu bilaabaa inuu beddelo oo lafaha laga soo saaro labada dhinac ee derbiga.
Volcano-biyoodka: Waa dillaacyo ay soo saarto is-dhexgalka magma ee biyaha dhulka ama biyaha sare. Waa 'dareere: oo u dhiganta strombolian dillaaca, in kasta oo ay ka sii qaraxyo badan yihiin.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto noocyada kala duwan ee foolkaanooyinka iyo qaraxyadooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Noocyada foolkaanaha